/ ngwaahịa / Mmekọahụ Ịbawanye Hormones
Ọnọdụ ụmụ nwanyị nke estrogen, progesterone, na testosterone na-adabere na afọ, karịsịa n'oge na mgbe mụọ ndị nwoke. Chọpụta ụzọ ị ga-esi mee ka ị na-enwe mmekọahụ, ọbụna na ọnọdụ gị dị elu. Na, maka ụfọdụ ndị ikom, ka ha na-etolite, ha na-agbada. Na, karịsịa, ụfọdụ ndị ikom na-enwe nsogbu nrụrụ na-erectile. Iji jiri ọgwụ ndị na-eme ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ, nyere ha aka ịnụ ụtọ ndụ, ma ọ bụ ndụ ka mma.
Inwe nsogbu site n'oge ruo n'oge anaghị abụ ihe kpatara nchegbu. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ erectile bụ nsogbu na-aga n'ihu, Otú ọ dị, ọ nwere ike ịkpata nchekasị, na-emetụta obi ike gị na inye aka na nsogbu nsogbu. Nsogbu ịchọta ma ọ bụ idebe ụlọ ere nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke ọrịa ahụ na-adịghị mma nke chọrọ ọgwụgwọ na ihe ize ndụ maka ọrịa obi.
ọgwụ a na-akpọ "nitrates" nke a na-emekarị maka ihe mgbu obi
Na-egosi 1-8 nke 12 results